मेकअपको साइड इफेक्टः कुरुप पो बन्दै हुनुहुन्छ कि ?
मेकअप । साधरणतय अनुहार आकर्षक देखाउन गरिने लिपपोतलाई बुझिन्छ । यसका लागि थरीथरीका प्रोडक्ट बजारमा उपलब्ध छन् । छाला चम्काउनेदेखि गोरो बनाउनेसम्म । चाहुरी लुकाउनेदेखि दाग-धब्बा ढाकछोप गर्नेसम्म । फुलेको कपाल कालो बनाउनेदेखि सिल्क र कर्ली बनाउनेसम्म । नमिलेको आँखी भौं मिलाउनेदेखि ओंठ रसिलो बनाउनेसम्म । मेकअप नगर्दा के हुन्छ ? हामी ठान्छौं, ‘जति आकर्षक,
लुगा त थरीथरीको लगाइन्छ, तर आफैलाई सुहाएको जस्तो लाग्दैन । ज्यान भद्दा भएर हो वा लुगा नमिलेर ? भेउ पाउन सकिदैन । आफैलाई आफ्नो पहिरन असुहाउँदो लागेपछि हिनताबोध हुन्छ । आत्माविश्वास हराउँछ । ‘अरुले केही भन्लान् कि ?’ यस्तो आशंकाले मनमा ग्लानी पैदा हुन्छ । भनौं, असुहाउँदो पहिरनले मानसिक तनाव दिन्छ । यस्तो समस्या दुई
रोग किन लाग्छ ? यसको एउटै जवाफ हो, शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएर । जब शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात इम्युनिटी सिस्टम कमजोर हुन्छ, तब रोग हावी हुन्छ । हामी अनेक हिसाबले जीवाणुको सम्पर्कमा रहन्छौं । यस्ता जीवाणुहरुको संक्रमणबाट रोग लाग्छ । कतिवय अवस्थामा शरीरका अंगहरुको कार्य-स चालनमा अवरोध पुग्छ । यसबेला हाम्रो शरीरसँग रोग प्रतिरोधात्मक
दीपिका पादुकोणका लागि कसले दुलहीको पहिरन डिजाइन गर्नेछ ?
यतिबेला दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंहको विवाहको चर्चा छ । बलिउडका यी हट जोडीले कहाँ वैवाहिक समारोह गर्नेछन्, कसरी गर्नेछन्, क-कसलाई निम्त्याउनेछन् ? यावत् कुरा अहिले चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । उनीहरुले यस्ता केही जिज्ञासा भने मेटिसकेका छन् । दीपिका-रणवीरले विवाहको निम्तो कार्ड सार्वजनिक गरिसकेका छन् । विवाहको मिति तय गरिसकेका छन् ।
यसरी छान्नुहोस् सस्तो र स्टाइलिस गहना
गहना सुन वा चाँदीको मात्रै हु्ँदैन । आजभोलि फ्लावर, पर्ल र पेपर गहनाको माग अत्यधिक छ । यस्ता गहनाका धेरै फाइदा छन् । पहिलो यो सस्तो छ । दोस्रो आकर्षक र स्टाइलिस अनि हल्का पनि । अर्थात् यो तपाईंका लागि फ्रेन्ड्ली हुनेछ । फ्लावर ज्वेलरी यस्तो गहना फूल र पातको प्रयोगबाट बनाइन्छ । बिहेमा जाँदा
इतिहासकै सुन्दर र कामुक महिला हुन् क्लियोपेट्रा, तर दुखलाग्दो छ उनको जीवनकथा
हामी सुन्दरताको कुरा गर्छौं । सुन्दरी प्रतियोगिताहरु आयोजना गरिन्छ । सुन्दरताको चर्चा सर्वत्र हुनेगर्छ । सुन्दरता, जसलाई हामी प्राकृतिक देन मान्छौं, तर त्यसको सर्वव्यापी मानक के हो ? जएक रहस्यमयी पात्र क्लियोपेट्रा इतिहासमा एक यस्तो रहस्यमयी पात्रको रुपमा चिनिन्छिन् जसको रहस्यमाथि पर्दा हटाउने क्रम अझै पनि चलिरहेको छ र उनको रहस्यको बारेमा जान्न अझै पनि
मनसुन फेसनः वर्षायाममा कस्तो ड्रेसअप स्टाइलिस देखिन्छ ?
वर्षायाम भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा सबैभन्दा पहिले के आउँछ ? झमझम पानी परिरहेको रमाइलो वातावरण वा गाउँका फाँटहरुमा हिलो खेल्दै रोपाई गरिरहेको दृश्य मानसपटलमा घुम्न थाल्छ होला । वर्षायामको समयमा हामीलाई बाहिर हिँड्न धेरै गाह्रो हुन्छ । अझै नेपालको सडकहरुमा वर्षायाममा यात्रा गर्नु त धेरै नै जोखिम पनि हुन्छ । यस्तोमा तपाईंलाई वर्षायाममा के पहिरिने,